ShweMinThar: iPhone အ​ကြောင်း မှတ်​သားဖွယ်​ရာ တချို့
iPhone ချစ်​သူတို့​ရေ. . .iPhone နှင့်​ပတ်​သက်​ပြီး
ios မှာ အမြဲတမ်းကြုံ​တွေ့နေရတတ်​တဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ အဖြေတွေ
ကို တခါတည်း စုစည်းတင်​​ပြလိုက်​ပါတယ်​။
1. iPhone မှာVideo ဘယ်လိုဒေါင်းမလဲ?
ဒီ App တွေကနေဒေါင်းပါ (FB Video လည်းရပါတယ်)
Files - File Browser & Manager by Efrem Nebay
QWE by Baulin Roman
2. MP3 ဘယ်လိုဒေါင်းမလဲ?
ဒီ App တွေကနေဒေါင်းပါ
Free Music Play - Playlist Manager & Mp3 Player. by Jean McCree
iMusic - Free ! by Imu Sic
3. Internet Setting ဘယ်လိုချိန်ရမလဲ?
Setting > Cellular > Cellular Data Options > Cellular Data Network ထဲက အပေါ်ဆုံး Cellular Data ခေါင်းစဉ်အောက်က APN , Username နေရာမှာ MPT SimCard ဆိုရင် mptnet လို့ရိုက်ထည့်ပါ ။ Telenor/Ooredoo ဆိုရင် internet လို့ရိုက်ထည့်ပါ ။
4. Hotspot လွှင့်တဲ့ဟာလေးပျောက်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Setting > Cellular > Cellular Data Option > Cellular Data Network မှာ အောက်ဆုံးက Personal Hotspot ခေါင်းစဉ်အောက်က APN နဲ့ Name နေရာမှာ MPT ဆင်းကဒ်ဆိုရင် mptnet လို့ထည့်ပါ ။
Telenor/Ooredoo ဆိုရင် internet လို့ရိုက်ပြီး Back ထွက်လိုက်ပါ ။
5. Application ဒေါင်းတာ 100MB ကျော်လို့ ဒေါင်းလို့မရဘူးတဲ့ ။
App Store မှာ 100MB ကျော်တဲ့ App တွေကို ဖုန်းအင်တာနက်နဲ့ဒေါင်းလုပ်မရပါဘူး ။ Wifi ချိတ်ပြီး (သို့) တခြားဖုန်းနဲ့ Wifi လွှင့်ပြီး ဆွဲရင် ရပါတယ် ။
6. Reset ချတာ အကုန်ပျက်သွားမှာဆိုးလို့ အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Setting > General > Reset ထဲက အပေါ်ဆုံးက Setting Reset ချရင် ဖုန်းရဲ့ Setting တွေက Default အတိုင်းဖြစ်သွားမှာပါ ။ ဘာ Data မှ မပျက်ပါ ။
ဒုတိယနေရာက Reset All Content and Setting လုပ်ရင် ဖုန်းတစ်လုံးလုံး ရှိသမျှ Data အကုန်ပျက်ပါမယ် ။
7. Version တင်ချင်တာ ဘယ်လိုတင်ရမလဲမသိလို့ ?
Setting > General > Software Update > Check For Updates နှိပ်ပါ ။ Version အသစ်ရှိရင် ပေါ်လာပါမယ် ။ Download နှိပ်လိုက်ပါ ။ Download လုပ်ပြီးရင် Install လုပ်မလားမေးပါတယ် ။ Install Now နှိပ်လိုက်ပါ ။
8. အတုနဲ့အစစ်ဘယ်လို ခွဲမလဲ ?
အမှန်တကယ်တော့ ကြည့်ရတာလွယ်ပါတယ် ။ မကြည့်တတ်ရင်
ဒီ Website မှာ ဖုန်းရဲ့ Serial Number ရိုက်ကြည့်လိုက်ရင် ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်လာပါမယ် ။ ပေါ်လာရင် အစစ်ပါ ။ မပေါ်လာရင် အတုပါ ။
9. iCloud အကောင့် ဝင်ထားတာ ရှိမရှိသိချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဒီ Website မှာဖုန်းရဲ့ IMEI Number (or) Serial Number ထည့်ရင် ပေါ်လာပါတယ် ။
Activation Lock Off ဆိုရင် iCloud account ဝင်ထားတာ မရှိပါဘူး။
Activation Lock On ဆိုရင် iCloud account ဝင်ထားပါတယ် ။
10. မြန်မာ ဖောင့် သွင်းချင်တယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ?
ဒီ App လေးဒေါင်ပြီးရင် App ထဲမှာ Zawgyi One ကိုရွေးပါ ။ အလိုလို Setting ပေါ်လာပါမယ် ။
Install နှိပ်လိုက်ပါ ။
Keyboard ကို ဒီက ဒေါင်းပါ ။
ဒေါင်းပြီးရင် Setting > General > Keyboard > Add New Keyboard > Zawgyi One ကို On လုပ်လိုက်ပါ ။
11. Firmware ရေးနေရင်း Error Code 14တက်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ?
Error 14က .ipsw file မှားတာကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်သလို iTunes Version နိမ့်ရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ Firmware File မှန်မမှန်ပြန်စစ်ပါ ။ iTunes Version အမြင့်ဆုံးဟုတ်မဟုတ် ပြန်စစ်ပါ။
12. Jail Break မလုပ်ထားတဲ့ Device ကို Computer မပါဘဲ RingTone ဘယ်လို သွင်းမလဲ?
ဒီ Post ထဲက Bro ရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါ ။
13. ကိုယ့် ဖုန်းက ဘယ်နိုင်ငံအလုံးလဲသိချင်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Setting > General > About > Model ထဲက နောက်ဆုံး စာလုံးတွေနဲ့ Link မှာပြထားတဲ့ ဇယားထဲမှာ တိုက်ကြည့်ပါ ။
14. "This charger or Accessories is not compatible..." ဘာညာပေါ်လာရင် ဘာလုပ်ရမလဲ?
Original Charger နဲ့မသွင်းဘဲ Quality ညံ့တဲ့ Copy Charger နဲ့သွင်းလို့ဖြစ်တာပါ ။
ကားမီးခြစ်ပေါက်မှာ ထိုးတဲ့ Adapter နဲ့ထိုးရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ် ။
Charger ပြောင်းသွင်းကြည့်ရင် ရနိုင်ပါတယ် ။
မရရင် Setting Reset လုပ်ကြည့်ပါ ။
15. လိုချင်တဲ့ App က Free မဟုတ်ရင် ဘယ်လိုဝယ်မလဲ?
iTunes Gift Card တစ်ကဒ်ဝယ်ပါ ။ App Store ထဲက Home Page အောက်ဆုံးနားမှာ Redeem နှိပ်ပါ ။ Gift Card ကို Scan ဖတ်ပြီးရင် ရပါပြီ ။ လိုချင်တဲ့ App ဝယ်ပါ ။
16. Reset ချပြီးပြန်တက်လာတာ Easy Touch ပျောက်သွားတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Setting > General > Accessibility > Assistive Touch ကို On လုပ်ပါ ။
17. Reset ချပြီး ပြန်တက်လာတာ Battery Level မပြတော့ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Setting > Battery > Battery Percentage On လုပ်ပါ ။
18. Finger Print Disabled ဖြစ်သွားတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
Finger Print မရတော့ရင် နီးစပ်ရာ Apple Service ကျွမ်းကျင်သူကိုပြပါ ။ ကြိုးလွှတ်သွားတာဆိုရင် ပြန်တပ်လိုက်လို့ရပါတယ် ။ ပျက်သွားတာဆိုရင် ပြန်ပြင်လို့မရတော့ပါ ။ အစားထိုးပစ္စည်းထည့်လို့မရပါဘူး CPU တစ်ခုနဲ့ Touch ID တစ်ခုကိုပေါင်းပြီးမှ Apple က တစ်စုံထုတ်ထားတာပါ ။ ပြင်လို့မရပါ ။
19. Zapya နဲ့ကူးထာတဲ့ Video File ကို Camera Roll ထဲ ဘယ်လိုပို့ရမလဲ?
Zapya နောက်ဆုံး Version ရှိမှ ရမှာပါ ။
ကူးထားတဲ့ Video File ကို တစ်ချက်ထောက်ပါ ။ Import ဆိုတာလေးနှိပ်ပါ ။ Importing ဆိုတဲ့ စာတန်းအနီလေးပျောက်သွားရင် ရပါပြီ
Credit: iPhone Myanmar
Labels: Q&A, နည်းပညာ